WIMKIN Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao 2022] | APKOLL
WIMKIN no fampiharana Android farany indrindra, izay manolotra serivisy media sosialy tsara indrindra ho an'ny mpampiasa. Izy io dia manome malalaka ny fitenenana amin'ny rehetra. Afaka mizara ny heviny sy ny heviny ary ny zavatra rehetra ny olona. Afaka mihaona amin'ny olona vaovao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao koa ny mpampiasa ary mahafantatra momba azy ireo.
Ny sehatra media sosialy dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hizarana ny fahalalanao amin'ny olon-kafa, saingy noho ny fameperana, tsy afaka mizara ny marina na ny tena fanambarany ny olona. Noho izany ity fampiharana Android farany ity dia novolavolaina ho an'ny olona rehetra, izay mankahala fameperana.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity fampiharana ity dia mitovy amin'ny Facebook, izay manome ny mpampiasa hahatakatra azy mora kokoa. Fa misy endri-javatra vaovao an-taonina miampy azy, izay manome ny traikefa tsara indrindra ho an'ny rehetra.
Hizara an-tsipiriany ny momba an'ity rindranasa ity izahay. Raha izany, raha te hahalala momba azy kely ianao, alohan'ny hampiasana azy dia aza misalasala mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy. Azonao atao koa ny mizara ny hevitrao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Topimaso momba ny App WIMKIN
Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra ny sehatra media sosialy tsara indrindra. Novokarin'i Jason Sheppard. Manome ny mpampiasa hiresaka malalaka sy hiresaka momba ny lohahevitra rehetra izy io, tsy misy fameperana. Tsy manome hetsika momba ny resaka, fifanakalozan-kevitra, horonan-tsary na sary. Manolotra serivisy tsara indrindra amin'ny fizarana ara-tsosialy.
Manolotra kaonty maimaimpoana ho an'ireo mpampiasa izy io, izay ahafahan'ny olona rehetra manerantany miditra ao amin'ity sehatra ity. Mila kaonty mailaka fotsiny izany. Manome piraofilina izy io, izay afaka manitsy arak'ireo mpampiasa. Ny fanaingoana ny mombamomba azy dia mitovy amin'ny FB. Ny sarin'ny piraofilina, ny mombamomba ny mombamomba, ny namana, ny sary, ny sary misy ary ny maro hafa dia misy ao amin'ny piraofilina.
Manolotra fizarana hafa izy, ny fizarana voalohany dia trano. Amin'ity fizarana ity dia misy ny vaovao farany sy ny fahana farany misy. Ny vaovao sy ny fahana ihany no ho azonao, izay ampakarin'ny tompon'andraikitra na ny namanao. Manome ireo fiasa haneho hevitra amin'izany vaovao izany, haneho hevitra momba azy ireo, ary azonao zaraina izany.
Ny fizarana hafa dia ny fitadiavana mpikambana na namana. Ny mpampiasa rehetra dia hita ao amin'ny fizarana mpikambana, raha tsy nanakana anao ilay olon-kafa dia azonao atao ny mahita azy ireo. Azonao atao ny mitsidika ny mombamomba azy ireo, mba hahafantarana ny momba azy ireo. Afaka mandefa fangatahana fisakaizana ianao ary raha manaiky izany ilay olon-kafa dia afaka minamana ianao.
Izy io koa dia manolotra fizarana hafa toy ny sary, izay ahitanao ny sary nozaraina ho an'ny daholobe rehetra, Pejy, izay misy ny pejy rehetra, Mozika, avy amin'ny karazana, hetsika, izay manome ny daty sy ny antsipiriany rehetra.
Manome tsena ihany koa izy io, ahafahanao mividy vokatra samihafa ary mivarotra azy ireo koa. Manolotra fomba haingana sy mora hanehoana ny vokatrao. Azonao atao ihany koa ny mamaritra ny vidiny ary afaka mifampiresaka aminao ny mpividy raha te hividy ny vokatrao izy ireo.
Misy endri-javatra maro kokoa an-taonina ao amin'ity rindrambaiko ity, izay azonao atao ny mahita. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka miresaka tsy misy tahotra. Azonao atao koa ny mizara ity app ity amin'ny namanao sy ny fianakavianao. Afaka manana fahafinaretana betsaka amin'ity sehatra ity ianao.
Anaran'ny fonosana app.wimkin.android
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 6.0 ary any ambony
Ny sasany amin'ireo fiasa voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy maro hafa azonao zahana ao amin'ity rindrambaiko ity. Noho izany, hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity izahay, miaraka aminao rehetra ao amin'ny lisitra etsy ambany.
Mamorona Blog na mitsidika hafa
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io. Izahay koa dia mizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity fampiharana ity aminao. Tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
WIMKIN Apk no sehatra ara-tsosialy tsara indrindra hizarana na inona na inona amin'izao tontolo izao. Io no toerana tsara indrindra hizarana zavatra, afaka mizara ianao. Tsy manome fetra amin'ny fizarana na inona na inona. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka miteny ny marina tsy misy ahiahy.
Sokajy Apps, Social Tags WIMKIN, WIMKIN Apk, App WIMKIN Post Fikarohana
1 hevitra momba ny "WIMKIN Apk Download ho an'ny Android [Vaovao 2022]"
Novambra 1, 2020 amin'ny 3: 13 am
Efa tao Wimkin nandritra ny fotoana kelikely izao ary nahita fa nandao ireo tranonkala hafa izy ireo iray kilaometatra, tranonkala manampy sy mahitsy tokoa, mamporisika azy ireo.